Gorsituun kominikeeshinii boordii filannoo Itoophiyaa, Sooliyaanaa Shimellis (Suuraa faayilii)
Addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaaden fi paartilee kanneen biroon adeemsa filannoo itti aanu keessaa of baasuun isaanii jijjiirama akka hin fidne boordiin filannoo beeksise. Gorsituun kominikeeshinii boordichaa Sooliyaanaa Shimellis ibsa kennaniin, iyyata paartilee siyaasaan dhiyaateef furmaata fiduuf boordichi baatii tokko dura waan irraa barbaachisu raawwachuu isaa ibsanii, amma Addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaden fi paartilee biroon adeemsa filannoo keessaa of baasuun ba’iis ta’e akkaataa hojii irratti jijjiirama hin fidu jedhan.
Fulbaana 20 kan geggeessamu adeemsa sagalee kennuuf boordichi qophee xumuruu isaa kan ibsan Sooliyaanaan, filannoo bara 2013 naannolee filannoon marsaa lamaaniin iyyuu hin geggeessamnetti kan geggeessamu dhimma filannoo hanga yoonaa murtiin hin kennamne.
Gorsituun kominikeeshinii boordii filannoo Sooliyaanaa Shimellis kaleessa ibsa kennaniin naannolee 47 keessatti kan geggeessamu adeemsa filannoo bbara 2013, sagalee hiree murteeffannaa kan naannoo kibbaaf geggeessamuuf qophiin barbaachisu xumurameera jedhan.
Paartilee siyaasaa filannoo kana keessatti hirmaataniif sabaa himaalee naannoo 9 keessatti yeron kennameefii dadammaqiinsa filannoo geggeessaa kan turan ta’uu ibsanii, qopheen meeshaalee dilannoos xumuramuu dubbataniiru. Haa ta’u malee Addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen guyyoota dura filannoo keessaa of bbaasuu ibsanii jiran.
Kana ilaalchisuun itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Hasan Abdilqaadir VOAf akka ibsanitti naannoo Somaalee fi walumaa gala Itiyoopiyaa keessa sirna dhablummaa fi aangootti seeraan ala fayyadamuutu jira jedhanii, filannoo walabaa fi haqaa geggeessuuf haalli mijataan waan hin jiraanneef filannoo naannoo Somaalee keessatti geggeessamu irraa of hambisuu isaanii ibsanii jiru jedha Kenedii Abaatee Finfinnee irraa